Mark Gurman: Tsy hisy ny AirPods Max | Avy amin'ny mac aho
Toa izany tsy hisy ny AirPods Max taranaka faharoa. Na dia toa nanapa-kevitra aza i Apple fa hamoaka loko vaovao amin'ity fitaovana ity izy. Rehefa dinihina fa efa manana loko ny iMac, ny AirPods Max koa, amin'ny ho avy dia misy ny resaka fa ny MacBook Pro dia mety ho tonga amin'ny loko samihafa ary natombok'i Apple Watch daholo izany fipoahana izany, tsy ho gaga aho amin'izany rehetra izany. tsy ela mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple dia niverina tamin'ny vanim-potoanan'ny taona 1976-1998.
Ireo tsaho navoakan'ny mpandalina Mark Gurman avy any Blommberg, Raha ny tokony ho izy dia matetika no marina, mampitandrina izy ireo ny amin'ny tsy fahafahan'ny AirPods Max ho an'ny taranaka faharoa eny an-tsena. Eny hahita loko vaovao isika fa tsy hanana fiasa vaovao na fanamboarana bibikely. Tsy ao anatin'ny drafitr'i Apple ny hamoaka fanavaozana.
Ankehitriny, ilaina ve izany? Eny, amin'ny fitsipika dia toa izany. Voalohany indrindra, manana ny olana amin'ny fampihenana ny AirPods Max amin'ny fitaovana 629 euro izahay. Manana mpampiasa vitsivitsy izahay mitaraina ny amin'ny bateria ary farany ny tsy fitoviana Apple Lossless avy amin'ny Apple Music. Noho izany, amin'ny fiheverana ireo toe-javatra ireo dia mino tanteraka aho fa ilaina ny famerenana ny vokatra ary noho izany dia andiany faharoa izay inoako fa halefa. fa eo antenatenan'ny taona 2022.
Ny lazain'i Marka momba an'i Bloomberg dia hoe izay hisy dia ny fandefasana loko vaovao Ary ankehitriny isika dia manana azy ireo amin'ny volondavenona volondavenona, volafotsy, maitso, lanitra manga sy mavokely, na dia eo aza ny takelaka sofina azo ovaina dia mamela fitambarana loko maro. Izay tsy mahagaga raha mijery ny fironana miloko tamin'ny famoahana farany an'ny orinasa. Fa mandeha izahay fa mila loko ny mpampiasa, eny saingy mila fitaovana 629 euro ihany koa izy ireo mba hiasa tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Mark Gurman: Tsy hisy ny AirPods Max taranaka faharoa